Ciidan Beeleed Dagaal Kulul Kadib Qabsaday Qaybo Ka Mida Magaalada Boosaaso | Marsa News
Ciidan Beeleed Dagaal Kulul Kadib Qabsaday Qaybo Ka Mida Magaalada Boosaaso
November 13, 2019 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaadhay Magaalada Boosaaso ayaa sheegaya inay qeyb kamid ah la wareegeen ciidamadii Maanta weerarka ku soo qaaday.
Ciidamadaan oo u abaabulan qaab qabiil isla markaana ka tirsan Beesha Cali Saleebaan oo wata tobaneeyo gawaadhida dagaalka ayaa qabsaday qeybo ka mid ah Magaalada Boosaaso kadib iska hor imaad maanta ka dhacay Koontaroolka laga soo galo Magaalada.
Ciidamada isku dhacay ayaa la sheegayaa in ay ahaayeen kuwo suga amniga Koontaroolka laga galo Boosaaso iyo Ciidan la sheegay in uu watay Taliye lagu magacaabo Ciise Yulux.
Ciidamada ayaa la sheegay inay qabsadeen jidka laga galo Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Boosaaso iyo agagaarka Xarumaha ay dagan yihiin Hey’adaha Save the Children, WFP iyo UNDP.Valueimpression Placeholder
Tiro ku dhow shan qof ayaa la sheegayaa in ay ku dhinteen isku dhacaasi dhexmaray labada Ciidan iyada oo mid ka mid ah dhinacyada dagaallamay ay ka baxeen Degmada Carmo islamarkaana doonayeen in ay galaan gudaha Boosaaso.
Maleeshiyada hubeysan ayaa la sheegay inay gurmad u aheyd Ciidamo ay leedahay Hey’ad heysatay saadka Ciidamada Badda oo la sheegay inay saaka xiratay waddooyinka Boosaaso.
Wararka ayaa sheegaya inay magaalada ka taagan tahay xiisad ka dhalatay qandaraas lagala laabtay Hey’adda PDG oo heysatay saadka Ciidamada Badda Puntland ee ay tababartay Shirkadda Saracen.